Our (Late) Zenfone Max Pro M2 Hands-on Overview - PX
Our (Late) Zenfone Max Pro M2 Hands-on Overview
ဒီဖုန်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ ပတ်ကျော်လောက်ကတည်းက စမ်းသပ်ထိတွေ့ခွင့်ရခဲ့ပေမယ့် အချိန်မလုံလောက်ခဲ့ဘူးလို့ ယူဆတာရယ်၊ မိတ်ဆက်ပွဲမှာတုန်းက Asus ရဲ့ ROG ဆီကို ပိုပြီးအာရုံရောက်နေခဲ့တာရယ်ကြောင့် လက်ထဲရောက်မှပဲ Overview ကို ရေးဖြစ်သွားတယ်။ ဆိုတော့ကာ Asus ရဲ့ Zenfone Max Pro M2 အပေါ် ကျွန်တော့်ရဲ့ 1st impression ရယ်၊ အရင် Generation မှာထက် ဘာတွေပိုထူးသွားသလဲ ဆိုတာရယ် ကို ပြောပြသွားမှပါ။ (Full Review ကိုလည်း နှစ်မကူးခင် တင်နိုင်အောင် ကြိုးစားသွားမှာမို့ စောင့်မျှော်အားပေးကြပါဦး)
ဒီဖုန်းကို စမြင်ချိန်မှာ အရင် Generation နဲ့အသိသာဆုံး ကွာခြားသွာစေတဲ့အချက်က သူ့ရဲ့ Build Quality နဲ့ Design ပါ။ Pro M1 တုန်းကလို Metal Body နဲ့မဟုတ်တော့ပဲ Glass ဆန်ဆန် Plasitc အကြည်နဲ့လုပ်ထားတာမို့ ဒီဇိုင်း၊ကာလာ အနေအထားမှာ အရင်ကထက် ပိုကြည့်ကောင်းသွားတယ်။ Mid-range ဖုန်းတစ်လုံးမှာ Display ကို Gorilla Glass6နဲ့အုပ်ပေးထားတာက အထင်ကြီးစရာပါ။ ဒီတော့ Pro M2 ဟာ အဆင်းရော အချင်းပါပြည့်စုံတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်လာပြီလို့ ဆိုရမှာပါ။
Pro M2 ဟာ Asus ကကြေငြာခဲ့သလိုပဲ 5000 mAh သုံးထားတဲ့ အပေါ့ပါးဆုံးဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်လာပါတယ်။ Pro M1 နဲ့ယှဉ်ကိုင်ကြည့်ရင်တောင် Pro M2 က လက်ထဲမှာ ပိုပြီးကျစ်လျစ်ပေါ့ပါးတယ်လို့ ခံစားရတယ်။ (ကြည့်ရတာ သူ့ရဲ့ Plastic Body က ခဲတစ်လုံးနဲ့ ငှက်နှစ်ကောင် ပစ်လိုက်သလိုပါပဲ)
အစကတော့ Pro M2 ရဲ့ Review Unit တွေမှာ Display Error ရှိတယ်ကြားခဲ့ရပေမယ့် Software Update နဲ့ Fix လုပ်နိုင်ခဲ့ပုံရတယ်။ ကျွန်တော်ရခဲ့တဲ့ Unit မှာတော့ Display က ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ပြီး Mid-range ဖုန်းတစ်လုံးမှာ အတော်ကောင်းတဲ့ Display လို့တောင် ဆိုရမှာပါ။
Pro M1 မှာထက် တိုးတက်လာတဲ့နောက်တစ်ချက်က သူ့ရဲ့ Performance ပါ။ Snapdragon 660 သုံးထားတဲ့ Pro M2 ဟာ ဘောင်ဝင်တန်းဝင် Mid-range ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်လာပါပြီ။ Stock Android ကို နှစ်သက်တတ်သူတွေတွက်ကတော့ Pro M2 ရဲ့ Hardware နဲ့ Software ပေါင်းစပ်မှုဟာ စိတ်ကျေနပ်စရာပါ။
Pro M2 မှာ Pro M1 တုန်းကလို ရိုးရာမပျက် ဆက်ပြီးကျန်ရှိနေတာက သူ့ရဲ့ Battery Life ပါ။ 5000 mAh Battery က တော်ရုံနဲအားသွင်းကြိုးကို မျက်စောင်းထိုးစရာမလိုပဲ စိတ်အေးလက်အေးအသုံးပြုနိုင်မှာပါ။
Pro M1 မှာတုန်းက စိတ်တိုင်းမကျခဲ့ရတဲ့ Camera ပိုင်းကိုလည်း Asus က Pro M2 နဲ့အတူ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားတာတွေ့ရတယ်။ 12MP, f/1.8 + 5MP f/2.4 Dual Camera ကြောင့် Camera ပိုင်းမှာ Pro M1 တုန်းကထက်ပိုသာတဲ့ Image Quality မျိုးကို မြင်တွေ့ခဲ့ရသလို 13MP Front Camera ကြောင့် Selfie ပိုင်းမှာလည်း အရင်ကထက် ပိုအဆင်ပြေလာတယ်။ သဘောအကျဆုံးအချက်က Google Camera Mod ကို သုံးချင်သူတွေအတွက် Bootloader Unlock, Root စတာတွေမလိုပဲ PC ပေါ်မှာ လိုအပ်တဲ့ Driver Tools လေးတွေ Download လုပ်ပြီး Fastboot Command နှစ်ကြောင်းရိုက်ထည့်ပေးရုံနဲ့တင် Google Camera ကို ထည့်သုံးနိုင်တာကြောင့်ပါ။ (စမ်းချင်သူတွေအတွက်လည်း GCam ထည့်နည်း Link ကို အောက်မှာ ထည့်ပေးထားပါတယ်)
Pro M2 ရဲ့ Single Speaker အသံထွက်ကိုတော့ အတော်လေးသဘောကျမိတယ်။ (အသံကျယ်လွန်းလို့ ပြန်လျှော့နေရတဲ့အထိပဲ) ပြီးတော့ 3.5 mm Headphone Jack ကလည်း ရိုးရာမပျက် ရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့ အတော်လေးအဆင်ပြေတယ်။
ဒီလို Pro M1 နဲ့ယှဉ်ရင် သိသာတဲ့တိုးတက်မှုတွေပါဝင်လာတဲ့ Pro M2 မှာ User တွေအနေနဲ့ သဘောမကျလောက်မယ့် တိုးတက်မှုတစ်ခုကတော့ သူ့ရဲ့ဈေးပါ။ Pro M2 ရဲ့ 3/32 GB ဈေးဟာ မြန်မာငွေ ၃သိန်း၁သောင်း၉ထောင် ဖြစ်ပြီး 6/64 GB ကတော့ မြန်မာငွေ ၄သိန်း၂သောင်း၉ထောင် ထိ ကျသင့်မှာပါ။ (ကိုယ်တိုင်လည်း ဈေးနဲ့ ပါဝင်တဲ့ Storage ကို Complaint တက်ခဲ့မိတယ်) GSMArena မှာတော့ 4/64GB Version လည်း တွေ့ထားလို့ ကျွန်တော့်အမြင်ပြောရရင် အဲဒီ Version ကို ၄သိန်းအောက်လောက်နဲ့ရောင်းပေးနိုင်ရင်တော့ ပိုအဆင်ပြေလောက်မှပါ။ သို့ပေမယ့် သဘောကျမိတာက သူ့မှာ Micro SD Card Slot သီးသန့်ပါပြီး 512GB အထိ ထပ်စိုက်အသုံးပြုနိုင်မယ့်အချက်ပါ။ (Asus ကလည်း Max Pro M2 အားပေးဝယ်ယူသူတွေအတွက် ဖုန်းဘူးထဲမှာ Surprise Gift လေးထည့်ပေးသွားဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ ပြောထားပါတယ်။) အရောင်အနေနဲ့ Blue & Titanium ကိုရရှိမှာပါ။
ဒီတော့ Asus ရဲ့ Zenfone Max Pro M2 နဲ့ပတ်သက်ပြီး ပရိတ်သတ်ကြီးကရော ဘယ်လိုမြင်လဲ? ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင် (Full Review) မလာခင်မှာ ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးသွားနိုင်ပါတယ်။ မလုပ်တာကြာပြီဖြစ်တဲ့ ဒီ Review Section ကိုလည်း အရင်လိုပဲပြန်အားပေးကြပါဦး။
ဒီဖုနျးလေးနဲ့ပတျသကျပွီး လှနျခဲ့တဲ့ ၁ ပတျကြျောလောကျကတညျးက စမျးသပျထိတှခှေ့ငျ့ရခဲ့ပမေယျ့ အခြိနျမလုံလောကျခဲ့ဘူးလို့ ယူဆတာရယျ၊ မိတျဆကျပှဲမှာတုနျးက Asus ရဲ့ ROG ဆီကို ပိုပွီးအာရုံရောကျနခေဲ့တာရယျကွောငျ့ လကျထဲရောကျမှပဲ Overview ကို ရေးဖွဈသှားတယျ။ ဆိုတော့ကာ Asus ရဲ့ Zenfone Max Pro M2 အပျေါ ကြှနျတေျာ့ရဲ့ 1st impression ရယျ၊ အရငျ Generation မှာထကျ ဘာတှပေိုထူးသှားသလဲ ဆိုတာရယျ ကို ပွောပွသှားမှပါ။ (Full Review ကိုလညျး နှဈမကူးခငျ တငျနိုငျအောငျ ကွိုးစားသှားမှာမို့ စောငျ့မြှျောအားပေးကွပါဦး)
ဒီဖုနျးကို စမွငျခြိနျမှာ အရငျ Generation နဲ့အသိသာဆုံး ကှာခွားသှာစတေဲ့အခကျြက သူ့ရဲ့ Build Quality နဲ့ Design ပါ။ Pro M1 တုနျးကလို Metal Body နဲ့မဟုတျတော့ပဲ Glass ဆနျဆနျ Plasitc အကွညျနဲ့လုပျထားတာမို့ ဒီဇိုငျး၊ကာလာ အနအေထားမှာ အရငျကထကျ ပိုကွညျ့ကောငျးသှားတယျ။ Mid-range ဖုနျးတဈလုံးမှာ Display ကို Gorilla Glass6နဲ့အုပျပေးထားတာက အထငျကွီးစရာပါ။ ဒီတော့ Pro M2 ဟာ အဆငျးရော အခငျြးပါပွညျ့စုံတဲ့ဖုနျးတဈလုံးဖွဈလာပွီလို့ ဆိုရမှာပါ။
Pro M2 ဟာ Asus ကကွငွောခဲ့သလိုပဲ 5000 mAh သုံးထားတဲ့ အပေါ့ပါးဆုံးဖုနျးတဈလုံးဖွဈလာပါတယျ။ Pro M1 နဲ့ယှဉျကိုငျကွညျ့ရငျတောငျ Pro M2 က လကျထဲမှာ ပိုပွီးကဈြလဈြပေါ့ပါးတယျလို့ ခံစားရတယျ။ (ကွညျ့ရတာ သူ့ရဲ့ Plastic Body က ခဲတဈလုံးနဲ့ ငှကျနှဈကောငျ ပဈလိုကျသလိုပါပဲ)
အစကတော့ Pro M2 ရဲ့ Review Unit တှမှော Display Error ရှိတယျကွားခဲ့ရပမေယျ့ Software Update နဲ့ Fix လုပျနိုငျခဲ့ပုံရတယျ။ ကြှနျတျောရခဲ့တဲ့ Unit မှာတော့ Display က ကောငျးကောငျးအလုပျလုပျပွီး Mid-range ဖုနျးတဈလုံးမှာ အတျောကောငျးတဲ့ Display လို့တောငျ ဆိုရမှာပါ။
Pro M1 မှာထကျ တိုးတကျလာတဲ့နောကျတဈခကျြက သူ့ရဲ့ Performance ပါ။ Snapdragon 660 သုံးထားတဲ့ Pro M2 ဟာ ဘောငျဝငျတနျးဝငျ Mid-range ဖုနျးတဈလုံးဖွဈလာပါပွီ။ Stock Android ကို နှဈသကျတတျသူတှတှေကျကတော့ Pro M2 ရဲ့ Hardware နဲ့ Software ပေါငျးစပျမှုဟာ စိတျကနြေပျစရာပါ။
Pro M2 မှာ Pro M1 တုနျးကလို ရိုးရာမပကျြ ဆကျပွီးကနျြရှိနတောက သူ့ရဲ့ Battery Life ပါ။ 5000 mAh Battery က တျောရုံနဲအားသှငျးကွိုးကို မကျြစောငျးထိုးစရာမလိုပဲ စိတျအေးလကျအေးအသုံးပွုနိုငျမှာပါ။
Pro M1 မှာတုနျးက စိတျတိုငျးမကခြဲ့ရတဲ့ Camera ပိုငျးကိုလညျး Asus က Pro M2 နဲ့အတူ ပွနျလညျပွငျဆငျထားတာတှရေ့တယျ။ 12MP, f/1.8 + 5MP f/2.4 Dual Camera ကွောငျ့ Camera ပိုငျးမှာ Pro M1 တုနျးကထကျပိုသာတဲ့ Image Quality မြိုးကို မွငျတှခေဲ့ရသလို 13MP Front Camera ကွောငျ့ Selfie ပိုငျးမှာလညျး အရငျကထကျ ပိုအဆငျပွလောတယျ။ သဘောအကဆြုံးအခကျြက Google Camera Mod ကို သုံးခငျြသူတှအေတှကျ Bootloader Unlock, Root စတာတှမေလိုပဲ PC ပျေါမှာ လိုအပျတဲ့ Driver Tools လေးတှေ Download လုပျပွီး Fastboot Command နှဈကွောငျးရိုကျထညျ့ပေးရုံနဲ့တငျ Google Camera ကို ထညျ့သုံးနိုငျတာကွောငျ့ပါ။ (စမျးခငျြသူတှအေတှကျလညျး GCam ထညျ့နညျး Link ကို အောကျမှာ ထညျ့ပေးထားပါတယျ)
Pro M2 ရဲ့ Single Speaker အသံထှကျကိုတော့ အတျောလေးသဘောကမြိတယျ။ (အသံကယျြလှနျးလို့ ပွနျလြှော့နရေတဲ့အထိပဲ) ပွီးတော့ 3.5 mm Headphone Jack ကလညျး ရိုးရာမပကျြ ရှိနသေေးတယျဆိုတော့ အတျောလေးအဆငျပွတေယျ။
ဒီလို Pro M1 နဲ့ယှဉျရငျ သိသာတဲ့တိုးတကျမှုတှပေါဝငျလာတဲ့ Pro M2 မှာ User တှအေနနေဲ့ သဘောမကလြောကျမယျ့ တိုးတကျမှုတဈခုကတော့ သူ့ရဲ့ဈေးပါ။ Pro M2 ရဲ့ 3/32 GB ဈေးဟာ မွနျမာငှေ ၃သိနျး၁သောငျး၉ထောငျ ဖွဈပွီး 6/64 GB ကတော့ မွနျမာငှေ ၄သိနျး၂သောငျး၉ထောငျ ထိ ကသြငျ့မှာပါ။ (ကိုယျတိုငျလညျး ဈေးနဲ့ ပါဝငျတဲ့ Storage ကို Complaint တကျခဲ့မိတယျ) GSMArena မှာတော့ 4/64GB Version လညျး တှထေ့ားလို့ ကြှနျတေျာ့အမွငျပွောရရငျ အဲဒီ Version ကို ၄သိနျးအောကျလောကျနဲ့ရောငျးပေးနိုငျရငျတော့ ပိုအဆငျပွလေောကျမှပါ။ သို့ပမေယျ့ သဘောကမြိတာက သူ့မှာ Micro SD Card Slot သီးသနျ့ပါပွီး 512GB အထိ ထပျစိုကျအသုံးပွုနိုငျမယျ့အခကျြပါ။ (Asus ကလညျး Max Pro M2 အားပေးဝယျယူသူတှအေတှကျ ဖုနျးဘူးထဲမှာ Surprise Gift လေးထညျ့ပေးသှားဖို့စီစဉျနတေယျလို့ ပွောထားပါတယျ။) အရောငျအနနေဲ့ Blue & Titanium ကိုရရှိမှာပါ။
ဒီတော့ Asus ရဲ့ Zenfone Max Pro M2 နဲ့ပတျသကျပွီး ပရိတျသတျကွီးကရော ဘယျလိုမွငျလဲ? ကြှနျတျောတို့ရဲ့အမွငျ (Full Review) မလာခငျမှာ ဝငျရောကျဆှေးနှေးသှားနိုငျပါတယျ။ မလုပျတာကွာပွီဖွဈတဲ့ ဒီ Review Section ကိုလညျး အရငျလိုပဲပွနျအားပေးကွပါဦး။